Fetin'ny horonan-tsary :: Homena lanja manokana ny sarimihetsika malagasy • AoRaha
Fetin’ny horonan-tsary Homena lanja manokana ny sarimihetsika malagasy
Handray ny fetin’ny sarimihetsika andiany fahatelo ny Institut français de Madagascar (IFM) Analakely, amin’ny 14-16 febroary 2020. Hibahan-toerana sy hahazo laka ao ny tontolon’ny sarimihetsika malagasy sy ny horonantsary frantsay. Tantara enina no fantatra fa halefa mandritra ireo telo andro ireo. Hanana ny hampiavaka azy ny horonantsary tsirairay, araka ny fanazavan’ny IFM mpikarakara, saingy misongadina indrindra sady handrasan’ny maro ny tantara “Les misérables” (Ireo fahadiranovana).
Hanana ny anjara toerany manokana ny sinema malagasy, amin’ny sabotsy 15 febroary 2020. Hisy ny fandefasana karazana sarimihetsika, toy ny tantara foronina sy fanadihadiana ary fanentanana. Arahina fifanakalozana sy adihevitra eo amin’ireo mpanatontosa, ireo rehetra ireo. Tafiditra ao anatin’ny fandaharam-potoana ny fifantenana an’ireo horonantsary fohy notontosaina teto Madagasikara.
Entanin’ny mpikarakara ho tonga mialoha, farafahatarany 15 minitra alohan’ny fandefasana horonantsary, izay nividy ny tapakila antsoina hoe “Pass” tao amin’ny IFM. Homena hipetrahan’ireo mividy tapakila tsotra, izay amidy amin’ny andron’ny hetsika, ny toerana raha mihoatra an’io fe-potoana io. Tsiahivina fa iray alina ariary ny saran’ny tapakila “Pass” raha toa ka telo arivo ariary ny tapakila tsotra.
Fetin’ny mpifankatia :: Hanolotra amboaram-boninkazo i Olombelo Ricky